ကမ္ဘာအနှံ့ ပေါ်လာတဲ့ သတ္တုတိုင်ကြီးတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်က မြွေကြီးတွေရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဆက်နွယ်မှုများ - Zet Star
ကမ္ဘာအနှံ့ ပေါ်လာတဲ့ သတ္တုတိုင်ကြီးတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်က မြွေကြီးတွေရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဆက်နွယ်မှုများ
နဲနဲ မျက်စိနောက်လာလို့ ဒီစတီးသတ္တုချောင်းကြီးဟာ ဟိုနေရာပေါ်လိုက် ဒီနေရာ ပျောက်လိုက် ဖြစ်နေခြင်းဟာ ယူအက်ဖ်အို နဲ့ ဂြိုဟ်သား ရူးဒေ အပျော်လုပ်တာ မဟုတ်ရင် တရုတ်ရဲ့ နိုင်ငံရေး အာရုံ လှည့်ကွက်ပါပဲ / ယူဆတယ်
နောက် ခုတလော ရန်ကုန်မှာ စပါးအုံး စပါးကြီးမွေ အကောင်ကြီးတွေ တွေ့တာဟာ ယတြာအရ လုပ်ဆောင်တာ မဟုတ်ပဲ မြေအောက်တွင်း မြောင်းတွေထဲကနေ ထွက်လာ တွေ့တာဆိုတော့ အဲလိုမြွေကြီးတွေဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မြေအောက် မြို့ပတ်လှိုဏ်ဂူထဲမှာ ပေါက်ဖွားရှင်‌သန်နေကြတယ်လို့ လေ့လာမှတ်သားဖူးတယ်
ဒါကြောင့် လူတွေဟာ ထိုမြေအောက် လှိုင်ဂူတွေထဲ မဆင်းမသွားမလာရဲကြပဲ အဂ်လိပ်လက်ထက် အလွန်ကစလို့ ခုထိ နစ်မြုတ် ပိတ်ဆို့ နေတဲ့နေရာလို့ သိရတယ်။ ခု အဲ့အောက်မှာ ဘာတွေ လုပ်နေ ဖြစ်နေသလဲ ဘယ်သူတွေ ၀င်ရောက် ခိုအောင်းနေသလဲ ??
အဲ့နေရာက ရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြအတွက်နဲ့ ပင်လယ်၀အတွက် မြေပေါ်မြေအောက် လုံခြုံရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေး နေရာလိုမျိုး ဖြစ်သလို အရေးပါတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်တယ် အရင်ခေတ်တွေက အဲ့အောက်မှာ မှောင်ခိုရာဇာတွေ လူမိုက်တွေ ခိုအောင်းလှုပ်ရှားရာ နေရာလည်း ဖြစ်တယ်
ခု ဆေးပြားတွေ ဆက်တိုက်ဖမ်းမိနေကြတော့ ထိုနေရာကို အသုံးပြုပြီး လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်နေကြသလား ဒါကြောင့် ထိုမြေအောက်မှ မြွေကြီးတွေဟာ လူတွေကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ပြမြေပေါ်ကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် တက်လာ ထွက်လာကြသလားဆိုတာ
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ သာကောတို့က လုပ်ရင် ပလန်နဲ့ စီမံကိန်းနဲ့ ဗျုဟာနဲ့ အကွက်ကျ အချိန်ယူပြီး လုပ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာ ဂူတွေဖောက်ပြီး ဆေးပြားနဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ကြံမှုတွေကိုကြည့်ရင် သေချာအချိန်ယူပြီး အသေးစိတ်နဲ့ စနစ်တကျ လုပ်ကြတယ် မဟုတ်လား။ ခု အမေရိကန်ကိုတောင် ဆယ်စုနှစ်လောက် အချိန်ယူ ဆဲလ်တွေမြုတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ထားတာ ထရန့်ဖော်ကောင်လုပ်ရှင်းနေလို့ မဟုတ်ရင် ယူအက်စ် ပြိုကွဲတာ ကြာလှပြီ။
ဒါကြောင့် သာကောရဲ့ စီမံကိန်းပရိုဂမ်တွေကို လေ့လာကြည့်တော့ အရင်ရေးပြခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်း ဗိုင်းရပ်စ်ဇီဝစစ်ပွဲအစီအစဥ်အတွက် သေချာ ပရိုဂမ်ဆွဲ တွက်ချက်ပြီးမှ ကမ္ဘာကို တိုက်တာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ထို့နေ့ရက်ဟာ ကမ္ဘာရဲ့ နှစ် ၁၀၀ ပြည့်နှစ်ရောက်တိုင်း ကမ္ဘာကပ်ဖြစ်သလို ကပ်ဆေးသလိုနဲ့ အယူဝါဒ ဒွိဟကွဲပြားနေတဲ့ အချိန်အခါကို ရွေးချယ်ပြီးမှ သဘာ၀လို ပုံဖမ်း
သဘာ၀မဟုတ်သော လုပ်ဆောင်မှုတွေကို တုပပြီး ကမ္ဘာ့လူသားတွေကို အာရုံပြောင်း သဘာ၀ကပ်ဘေးရောဂါ ပုံဖော်ဖို့အတွက် တိုက်ဆိုင်မှုနေ့စွဲကို အသုံးချ ထုတ်လုပ် ဖြန့်ိ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ ထိုကာလမတိုင်ခင် မြန်မာပြည်မှာလည်း ဆေးပညာ၀န်ထမ်းတွေ ကြားထဲကို မိုးကျတွေ ထည့်သွင်းထားလို့ ဆေးပညာရှင်များ ဆန္ဒပြကန့်ကွက် ထုတ်ဖော်မှု ကန်ပိန်းတွေ ရှိခဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း
နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် အသေးစိတ်ကအစ အချို့အရာတွေနဲ့ အရာရာကို ပေါ့ဆ အလေးမထား မတွေးဆကြပဲ မနေကြပါရန် သာကောနဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေဟာ စီမံကိန်း ပရိုဂမ်နဲ့ AI နည်းပညာတွေ အသုံးပြု တွက်ချက် လုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာ
ကျနော်တို့လို ဘာနည်းပညာမှမရှိ အတွေးခေါ် အသိဉာဏ်ခေတ်နောက်ကျပြီး ရိုးသားပြည်သူများတဲ့ မျိုးဆက်တခေတ်ကို_ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံကို နည်းပညာအမျိုးမျိုးနဲ့
နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးမှာ အလွယ်တကူ သိမ်းပိုက်လို့/ ပြီး အကျိုးမြတ် ထုတ်ယူလို့ ရတယ်ဆိုတာ စိတ်ထဲအမြဲ မှတ်ယူသိထားကြပါ…… ဗျာတို့ခဗျ
← ကိုဗစ်ကြောင့် မသေ၊ ကိုဗစ် အကြောက်လွန်ရောဂါကြောင့် တမလွန်ရောက်သွားကြသူများ
ကိုဗစ်ကို ပိုက်ဆံယူပြီး အပြင်မှာ စစ်ပေးတဲ့ ဆရာဝန် မှားလား? မှန်လား? →